စာရေးဆရာနှင့်စကားပြေ..။ – PoemsCorner
စကားပြေဆိုသည်ကို အကြမ်းဖျင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမှု ပြုရသော် ပြေပြစ်သော ၊ ဖတ်သူအတွက် ဖတ်ရ လွယ်ကူသော စာတစ်ပုဒ်….စကားစာ တစ်မျိုး ဟု ဆိုရပါမည်…။
စကားပြေ တစ်ပုဒ်တွင် ရှိသင့် ရှိအပ်သော တန်ဆာဆင် ထည့်သွင်းရေးသား အပ်သည့် အချက်အလက်များကို မိမိတို့ ဖန်တီးရာစကားပြေတွင် ဖန်တီးသူမှ ပါဝင်အောင် ထည့်သွင်းစီစဉ် ရေးသားရပါမည်…။
စကားပြေ တစ်ပုဒ်တွင် ရှိသင့်ရှိအပ်သော အလင်္ကာတို့နှင့် စကားလုံး၊ ၀ါကျ၊ စာပိုဒ်၊ စာပုဒ် တို့ကိုအစီအစဉ် စနစ်တကျ နေရာမှန်စွာ စကားပြေ ဖန်တီးသူက ရေးသားတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်….။
စကားပြေ ဆိုသည်မှာ ၀တ္ထု။ ပြဇတ်၊ ဆောင်းပါး၊ မှတ်တမ်း၊ အစမ်းစာ၊ ဟောစာ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စသည်ဖြင့်သော အခေါ်အဝေါ်များကို
လည်း အခြေခံသော အရေးအသား ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသည်..။ စကားပြေနှင့်သာ ထိုထိုသော အရေးအသား ပုံစံကွဲ အခေါ်အဝေါ်များကို ဆင့်ပွားရေးသား ဖန်တီး တည်ဆောက်ကြရပါသည်..။
စကားပြေသည်သာ အခြေခံရေးဖွဲ့အပ်သော တစ်ခုတည်းသော ပင်မ စာရေးသားနည်း လည်း ဖြစ်ပါသည်..။ ထိုသော စကားပြေ တစ်ပုဒ်တွင် ပါဝင်အပ် ၊ ယှဉ်အပ် ၊ ထဲ့သွင်း ရေးသားအပ်သော ပုံပြများထဲမှ တစ်ခုကို အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြရသော………။
စကားပြေ ဖန်တီးသူသည် ၄င်းေ၇းသားမည့် စကားပြေတွင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု ရှိရပါမည်…။ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခု ပါရှိရမည် ဆိုခြင်းမှာ ———
(၁)။ မိမိ သိထားသော အကြောင်းအရာကို စာဖတ်သူသိလာအောင် အသိပညာ ဗဟုသုတ ပေးလိုသော ရည်ရွယ်ချက်..။
(၂)။ မိမိ စိတ်တွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော ချစ်ခင်မှု ၊ ရွှင်မြူးမှု ၊ သနားမှု ၊ ကြောက်ရွံ့မှု ၊ စက်ဆုပ်မှု အစရှိသော စေတနာ တို့ကို အခြေ
ခံ ရေးသားမှု ပြု၍ ကိုယ်ဖန်တီးသော စကားပြေကို ဖတ်သူတို့တွင် မိမိကဲ့သို့ တဖန်ပြန်၍ ခံစား သိရှိသွားရန် ရည်ရွယ်ချက်..။
(၃)။ ပညာ၏ တန်ဖိုးကို သိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်..။
ထိုရည်ရွယ်ချက် (၃) မျိုးနှင့်တကွ အဖုံဖုံ အ၀၀ မူကွဲ ရည်ရွယ်ချက်များစွာ အသီးသီး အသက အသက ကိုယ်ဖန်တီးသော စကားပြေ တွင် တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုး ပါရှိရပါမည်…။ ထိုရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းအရာဖြင့် ကိုယ်ဆိုလိုချင်ရာကို ဖတ်သူသိအောင် ၊ဆိုလိုချက်
အသိပညာ ပေးသည် ဆိုရာဝယ်….. အသိပညာပေးနည်း များစွာ ရှိသည့် အားလျော်စွာ ထိုအထဲတွင် စာပေနှင့် အသိပညာပေးသော
လုပ်ရပ်သည် အလွန်သိမ်မွေ့ နက်နဲသော…. လွန်စွာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်…။ လူထုအတွင်းသို့ သိရလွယ်
ကူအောင် ပြုလုပ်သော နည်းများစွာ ထဲမှ အကောင်းဆုံး နည်းဗျူဟာ ကောင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်…။ စာပေအနုပညာ သည် ရသူ
အတွက်လည်း ယူရလွယ်ကူ၍ …လူနှင့် လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုရာ၌လည်း စာပေအနုပညာနှင့် ပညာပေးခြင်းသည် များစွာအ
သို့သော် ဖန်တီးသူ… ပေးသူသည် ကိုယ်ဆိုလိုရာ ၊ ကိုယ်ပေးချင်ရာ အသိပညာကို စီးမျောခံစားသူ (သို့မဟုတ်) ဖတ်ရှု့ မှတ်သား သူသို့ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော အရေးအသားနှင့် ဆိုလိုရင်း အတိအကျကို ရရှိသွားစေဖို့ ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းမျှ မဟုတ်ပဲ တိတိပပ ထိထိမိမိ
ဥပမာ ဆိုရသော ….. ကိုယ်ပေးလိုသည်က ပန်းသီး ၄င်းတို့ ရရှိသွားသည်က မရမ်းသီး ဖြစ်သွားသည် ဆိုခြင်းမျိုး ကို ဆိုလိုပါသည်။
ထိုသို့ မဖြစ်ရန် ဖန်တီးသူ ဘက်မှ သတိပြုသင့်ပါသည်…။
ရသပိုင်း အကြောင်းအရာကို ဖတ်မိပြီး စာဖတ်သူ အသိတရား လွဲချော်သွားခြင်းသည် ၄င်းစာဖတ်သူ အသိတရားပြည့်ဝသော အချိန်
ကာလတွင် အမှားကို အမှန်မြင် ပြန်ပြင်၍ သိရှိသွားနိုင်သော်လည်း…. ဓမ္မနှင့် လူမှုပါတ်ဝန်းကျင် အသိပညာပေး ဆောင်းပါးများ….
စကားပြေများကို ဖတ်သူထံ ဖန်တီးရေးသားသူမှ မှားယွင်းပေးသည် ဖြစ်စေ ….စာဖတ်သူမှ ဖန်တီးသူ၏ ရေးသားမှု ချွတ်ချော်မှု့ကြောင့်
…အားနည်းမှု့ကြောင့် မှားယွင်းမှတ်သား နာယူ လက်ခံသွားခဲ့သည် ဖြစ်စေ… ထိုအခါမျိုးတွင် ပေးသူနှင့် ယူသူနှင့် သူ၏ ပါတ်ဝန်းကျင်
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် လွန်စွာ ဆိုးရွားသော အကျိုးမရှိ ဆုံးရှုံးမှုများကို ရရှိစေတတ်ပါသည်…။
ထို့ကြောင့် စာပေရေးသား အသိပညာပေးမှု ဟူသည် လွယ်ကူပေါ့တန်သော လုပ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း စဉ်းစားချင့်ချိန်၍ မိမိ
တို့ စာပေဖန်တီးမှုကို သတိပြု လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်…။
ထို့အတူပဲ စကားပြေတစ်ပုဒ်တွင် ဖန်တီးသူသည် သဒ္ဒါမှန်မှု ၊ စကား အသုံးအနှုန်းမှန်မှု ၊ ၀ါကျ ထုံးဖွဲ့မှန်မှု ဟူသော စကားပြေ
တွင် ရှိမြဲ ဖြစ်သော မှန်မှု (၃) မျိုးကို မိမိစာတစ်ပုဒ် ဖန်တီးလျှင် အခြေခံလက္ခဏာများ အဖြစ် ဂရုပြုပြီး စည်းဘောင်တစ်ခု အဖြစ်သိမှတ်
ယင်းကဲ့သို့ မှန်မှု (၃) မျိုးကို အခြေခံရေးသားသော စကားပြေ (သို့) စာတစ်ပုဒ်သည် မိမိစာကို ဖတ်မိသူ အတွက် ရှင်းလင်းစွာ ဖတ်
ရှုမှတ်သားနိုင်မှု မှန်မှန်ကန်ကန်ကို ရရှိစေပါသည်..။ ဖတ်သူအတွက် အချိန်ကိုလည်း အကုန်သက်သာ စေပါသည်…။ မိမိတို့ ဆိုလိုရင်း
ကိုလည်း ဒက်ခနဲ ဆိုသလို သိရှိစေနိုင်ပါသည်…။
ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရှု့မှတ်သားခဲ့ဖူးသော စာကြီးပေကောင်းများတွင် ကျစ်လျစ်စွာ ဖော်ပြရေးသားခဲ့နိုင်ခြင်းသည် ထိုကဲ့သို့သော
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းကို အချိန်ယူ ပြန်လေ့လာကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စာပေရေးသားမှု အတတ်ပညာသည် “တိမ်မယောင်နှင့်နက်…လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သော ” အတတ်ပညာတစ်ခု ဖြစ်
သည်ကို ဤဆောင်းပါးနှင့် စာရေးသားသူ ..စာပေရေးသားချင်စိတ်စတင် ဖြစ်နေသော သူတို့ထံ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်…။
(သစ္စာနှင့် ရေးသော စာသည် စာဖတ်သူအတွက် အဖိုးဖြတ်မရသော အဆင်တန်ဆာကို ကောက်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး…..ရလိုမှု ပြွန်တည်နေ
သော ရမ္မက်နှင့် ရေးသောစာသည် စာဖတ်သူနှင့် သူ၏ မိသားစု ပါတ်ဝန်းကျင် အတွက် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး မှားယွင်းမှုများစွာနှင့်
ပျက်ဆီးစေသော အယူမှားခြင်း အသိတရားကို ၄င်းတို့ဦးနှောက်အသိတရားအတွင်းသို့ ရိုက်ထဲ့သွတ်သွင်း ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါ
ကိုးကား။ ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာစကားပြေ လက်ရွေးစင် န၀မတွဲမှ..။
In: ဆောင်းပါး Posted By: kyagee13 Date: Dec 26, 2012
မိုးတိမ်များနဲ့ စကားပြောခြင်း – 2
Leave comment No comment & 147 views